भौतिकशास्त्री स्टेफन हकिङ, जो भौतिक रुपमा रहेनन् ! | Screennepal
भौतिकशास्त्री स्टेफन हकिङ, जो भौतिक रुपमा रहेनन् !
२०७४, ३० फाल्गुन बुधबारscreennepalhot news, Offbeat0
लण्डन, ३० फागुन (एजेन्सी) । स्टेफन हकिङ एक यस्ता असाधारण व्यक्ति थिए, जो मरेर गएपनि संसारले उनलाई कहिल्यै बिर्सन सक्दैन र सक्दैन पनि । हो, प्रसिद्ध ब्रिटिश वैज्ञानिक तथा भौतिकशास्त्री स्टेफन हकिङको बुधबार निधन भएको छ । उनी ७६ वर्षको थिए ।
सुप्रसिद्ध भौतिशास्त्री हकिङले सन् १९८८ मा लेखेको ‘अ ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइम’ संसारमै धेरै बिक्रि हुने पुस्तकमा परेको थियो । भौतिकशास्त्र सम्बन्धमा ठूलो ज्ञान भएका उनले यस क्षेत्रको ‘ब्ल्याक होल’ र सापेक्षताबारेमा कैयौँ शोधहरु गरेका थिए ।
भौतिक विज्ञानसम्बन्धी कैयौँ विश्वप्रसिद्ध पुस्तकका लेखक उनका तीन छोराछोरीले बुधबार विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर उनको निधनको जानकारी गराएका छन् । उनका तीनजना छोराछोरी लुसी, रबर्ट र टिमले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘हाम्रा प्यारा बुबाको आज निधन भएकाले हामी अत्यन्तै दुःखी छौँ ।’
सो विज्ञप्तिमा उनीहरुले ‘उनी महान् वैज्ञानिक र असाधारण व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो’ भनेका छन् । उनका कृतिहरु, काम र योगदान आगामी धेरै समयसम्म पनि जिउँदो रहने छ उनीहरुले भनेका छन् ।
विज्ञप्तिमा आफ्ना पिताको ‘साहस र दृढता’ को निकै प्रशंसा गर्दै उनको प्रतिभाले संसारका मानिसहरूलाई नै उत्प्रेरित गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गरिएको छ । उनलाई २१ वर्षको उमेरम नै शरीरका अंगहरु नचल्ने एक दुर्लभ प्रकृतिको रोग लागेको थियो । त्यसपछि चिकित्सकहरुले उनलाई केही वर्षमात्र बाँच्ने घोषणा गरेका थिए ।
त्यसको केही वर्षपछि उनी शारीरिक रुपमा अशक्त थिए र ह्वीलचियरको सहायतामा रहँदै आएका थिए । उनी पछिल्लो समयमा पक्षाघात भएर घरैमा रहँदै आएका थिए ।
शारीरिक रुपमा उनी केही गर्न सक्ने अवस्था थिए । ह्वीलचियरको सहायताले मात्र यताउती गर्नसक्ने अवस्थामा रहँदै आएका उनी विश्वविद्यालयका प्राध्यापक समेत थिए । उनका पुस्तकहरु भौतिक विज्ञान विषयका लागि विश्वमा नै लोकप्रिय छन् । उनी शारीरिक रुपमा अशक्त मानिसले पनि अनुसन्धान, अध्ययन एवम् अरु प्राज्ञिक क्षेत्रमा कतिसम्म गर्नसक्छ भन्ने विषयमा विश्वमा नै एक उदाहरण बनेका थिए ।
सन् १९४२ को जनवरी ८ मा जन्मिएका उनलाई विश्वका सुप्रसिद्ध वैज्ञानिकहरु अल्बर्ट आइन्स्टाइन र सर आयज्याक न्युटनपछिका वैज्ञानिकका रुपमा तुलाना गर्ने गरिन्थ्यो । उनलाई यी प्रसिद्ध वैज्ञानिकसँग तुलना गरेर हेर्ने गरिएकोले पनि उनी विश्वप्रसिद्ध भएका थिए । उनलाई सन् १९७९ मा क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयको गणितको प्राध्यापकका रुपमा नियुक्त गरिएको थियो ।
उनका विज्ञान, भौतिक विज्ञान तथा गणितका पनि निकै लोकप्रिय पुस्तक र खोजहरु रहेका छन् । उनको निधनले देशलाई ठूलो क्षति पुगेको यहाँका प्राज्ञिक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरुले बताएका छन् । (एएफपी)
Previous Postतामाङ सञ्चार समूह काठमाडौंमा पुरानै अनुहार ! Next Postमृत्युपछि इच्छा पूरा...!